Global Voices teny Malagasy » Fahatsiarovana An’i Samad Behrangi, ilay Mpanoratra Nanainga Fanahy Iraniana Revolisionera Tsy Tambo Ho Isaina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Septambra 2016 14:59 GMT 1	 · Mpanoratra Hamid Yazdan Panah Nandika Candy
Sokajy: Iràna, Fanabeazana, Mediam-bahoaka, Zavakanto & Kolontsaina
Ny 31 Aogositra no manamarika ny faha-49 taona nahafatesan'ilay Iraniana-Azerbaijana mpanoratra, Samad Behrangi. Na amin'izao fotoana izao aza, efa ho 50 taona taorian'ny nahafatesany, dia mbola tononin'ireo Iraniana gadra politika  sy ny mpikatroka izay manohy miady amin'ny sivana, ny fahantrana ary ny tsy rariny ao amin'ny tanindrazany ireo teny sy hevitr'i Behrangi. Na dia fohy aza ny fiainany, dia mbola miteraka aingam-panahy amin'ny mpanoratra maro avy amin'ny sarangam-piainana samihafa amin'izao fotoana izao ny lova napetrak'i Behrangi.
Teraka tany TabriZ, tanàna any avaratra, tao amina fianakaviana Azeri-Tiorka  (iray amin'ireo vondrona vitsy an'isa lehibe indindra any Iràna) i Behrangi. Lasa mpampianatra teo amin'ny faha-18 taonany i Behrangi, ary nanomboka ny asa fampianarana tany amin'ireo tanàna ambanivohitra Iraniana-Azerbaijana. Ny fepetra mahonena iainan'ireo sekoly sy ny tsy fahampian'ny ho enti-manan'ireo mpianany dia tsy hoe nanamafy an'i Behrangi fotsiny, fa mainka koa nanome azy finiavana handroso hatrany.
Ny tena nampalaza an'i Benghari angamba dia ilay tantara fohy nosoratany, Mahi Siayeh Kochooloo , na Ilay Trondro Mainty Kely , izay manaraka ny dian'ny trondro kely iray mankany amin'ny ranomasimbe midadasika. Ny tantara dia vakiana toy ny anganon'ankizy, nefa mandalina fihaonana eo amin'ny fitomboan'ny taona sy ny fampandrosoana ara-politika ary ny fahatsiarovantena ara-tsosialy. Ny mpandray anjara fototra ao amin'ny tantara dia miatrika faniriana mitohy te-hanadihady ny fiainana ivelan'ny zava-misy atrehiny, ary hahita raha misy fiainana iray hafa tena azo iainana. Noraràn'ny Shah ao Iràna ilay tantara taty aoriana..
Nitady ny handrava ilay fitantarana mahazatra atao amin'ny bokin'ny ankizy i Behrangi, ary ho solon'izany dia hanolotra kosa torolalana mba ho fitaovana hiatrehana ny fiovana ara-tsosialy :
Tao anatin'ny folo taona nahafatesany, ny tanora Iraniana dia nikarakara sy nitarika hetsika nanerana ny firenena hanoreherana ny Shah tanatin'izay fantatra amin'ny hoe “revolisiona malaza indrindran'ny vaninandro maoderina ‘. Anisan'izany ny hery avy amin'ny ankavia izay naka aingam-panahy avy amin'i Behrangi, miaraka amin'ireo hafa avara-pianarana sy mpandinika.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/09/05/87697/
 gadra politika: http://www.washingtontimes.com/news/2010/may/11/iran-hangs-a-little-fish/
 mpikatroka : https://hra-news.org/en/tag/samad-behrangi
 Ilay Trondro Mainty Kely: https://www.amazon.com/Little-Black-Fish-Pippa-Goodhart/dp/1910328006/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1472536191&sr=8-2&keywords=behrangi
 fiovana ara-tsosialy: http://ajammc.com/2011/12/14/the-little-black-fish-realism-in-childrens-literature-2/
 revolisiona malaza indrindran'ny vaninandro maoderina: http://www.mei.edu/content/three-paradoxes-islamic-revolution-iran